Ebe nchekwa obodo - IntoKildare
Akụ kacha ọnụ ahịa obodo anyị bụ ndị obodo anyị. Enwere ọtụtụ ndị otu obodo na-enweghị atụ nke na-egosipụta ịdị ịtụnanya dị ịtụnanya nke ebe dị na Kildare.
Lelee ụfọdụ ndị otu obodo Kildare wee hụ ihe ha na-eme iji dobe Kildare n'ụdị ọkaibe.
Gburugburu ubi, anụ ọhịa na nne ọkụkọ, ụlọ ihe nkiri na-enye klaasị nka na nkuzi maka afọ niile.
Ịnyịnya Ịnyịnya Ireland
Horse Racing Ireland (HRI) bụ ikike mba maka ịgba ọsọ nke ọma na Ireland, yana ọrụ maka ọchịchị, mmepe na nkwalite ụlọ ọrụ ahụ.
Mụta mba ụwa
Tọrọ ntọala na 2013, Mụta International bụ otu ndị mmadụ na-agba mbọ na mmepe nke ohere inweta ohere, ọnụ ọnụ na nha nha nha anya ọmụmụ mba ofesi.
Obodo Monasterevin Tidy bụ mkpesa obodo na obere obodo na Kildare nke na -egosipụta ịhụnanya dị egwu maka mpaghara ha.
Obodo Newbridge Tidy
Obodo Newbridge Tidy bụ otu obodo na -agbasi mbọ ike ime ka obodo bụrụ ebe mara mma ebe obibi, ọrụ na azụmaahịa.
Ụlọ ihe nkiri Moat
N’ịbụ nke e hibere n’afọ ndị 1950, e mere Moat Club ka o nye Naas ụlọ ndị kwesịrị ekwesị maka ihe nkiri na tennis tebụl. Owuwu nke Moat Theatre bu ụzọ rụọ ọrụ dị ka […]